हार्नेलाई हाइसञ्चो, जित्नेलाई तनाव ! – News Of Nepal
मत गन्ने मेलो अब लगभग सकियो । मत गन्ती अझै लम्बिएको भए जित्नेले हार्न सक्थे र हार्नेले जित्न पनि सक्थे । त्यो अवस्थामा कसैको हारजित हुँदैनथियो । सबै समान हुन्थे । जमानत जफत हुनेलाई पनि जित्छु भन्ने लागिरहन्थ्यो । तर यो पालि गन्नेहरुले किन हो कुन्नि, पहिलेजस्तो ढिलो गरेनन् । फटाफट गने, हारजित छिटो टुङ्ग्याइदिए । अरुले सोचे होलान् हार्नेलाई तनाव भो, जित्नेलाई मस्ती । तर यो पालि अरुले सोचेजस्तो पनि भएन । बरु उल्टो भयो । हार्नेलाई हाइसञ्चो भयो, जित्नेलाई तनाव । कसरी भन्नुहोला, ल सुन्नुहोस् यसरी ।
मतगणना सकिन सकिन लाग्दा हार्नेलाई लाग्यो, अब जितिँदैन । जित्नको लागि देखेजानेको सबै जुक्तिबुद्धि लगाएकै हुन् । गणकले आफ्नोमा एउटा धर्को तान्न बिर्सियो भनेर एक मुठा मतपत्र तीन पटक गन्न लगाए । कहिले फलामे बारलाई भत्काउँलाझैँ गरेर झम्टिए । कहिले बसेकै कुर्सी भाँचिने गरी बुर्लुक्क उफ्रिए । बाकसमा ढुसी परेछ भनेर रिसाए, मतपत्र कुच्चिएछ भनेर ठुस्किए । फेरि गन्नु भनेर कराए । अर्कोपटक देख्लास् भनेर तर्साए । जति जोडबल गरे पनि आफ्नो चिह्नमा स्वस्तिक छापको थोप्लो नदेखिएपछि मुर्मुरिँदै घर गए ।
घरमा श्रीमतीले के भयो भनेर सोध्दै थिइन् । धाँधली भयो भन्दै भित्र पसे र खाटमा लम्पसार परेर सिरकले मुख छोपेर सुते । चुनावमा भोट माग्न हिँडेदेखि मतगणनामा मतपत्र हेर्दासम्मको थकाइले लखतरान परे पनि मरिगए निद्रा लागेन । मनमा कुराको हुण्डरी चल्न छाडेन । हुण्डरी घरी मनको आकाशमा उड्थ्यो, घरि पाताल छुन जान्थ्यो । जितेको भए के के हुन्थ्यो ? अहिले अबीरजात्रा भैसक्थ्यो । गालाभरी अबीर, गलाभरी खादा र माला । बधाई र शुभकामना थाप्न भ्याइनभ्याइ । कार्यालयमा फराकिलो कोठा, घुमाउने कुर्सी, टेबुलमा झण्डा । बाहिर निस्कँदा पिर्के सलामी । बेलुका टुच्च पार्टी, हल्का नशामा सुसेल्दै घर फर्कदाको आनन्द मात्र हुँदैनथ्यो, पाँच वर्षसम्म बस्दा चुनाव खर्च उठाएर एउटा घर नभए पनि घडेरीसम्म थपथाप गर्न पाइन्थ्यो । हेर त अब त्यतिका खर्च कहाँबाट कसरी उठाउने । बाँडेको पैसा फिर्ता ले भन्न पनि नमिल्ने । बिजोग हुने भयो ।
…………आ तर केही भएको छैन । इमानदार भएरै काम गरे पनि अरुले भ्रष्टाचार गर्यो भन्थे । विपक्षीले टिकीखान दिँदैनथिए । यसको पनि कचकच, उसको पनि कचकच, कहिले यो गर्नुपर्यो भन्थे, कहिले उ गर्नुपर्यो भन्थे । कसको मात्र कतिथोक गरेर साध्ये । न बेलामा भात खान पाइने, न अबेरसम्म सुत्ने पाइने । चुनावअघि के के मात्र गर्छु भनिएन, त्यो सबै कहाँ गर्न सकिन्थ्यो । आफूसँग चढ्ने साइकल छैन, किसानलाई बीउ छर्न हेलिकप्टरकै बन्दोबस्त गर्छु भनिएको थियो । जितेको भए कहाँबाट हेलिकप्टर ल्याउने ? चुनावमा भनेजस्तो सबैका आँगन आँगनमा सडक, भान्साभान्सामा धारा, बसीबसी माम, उठीउठी काम, खल्तीभरी दाम कहाँबाट पुर्याउने ? चुनाव जिते पनि मज्जा हुने त केही दिन मात्रै न हो, त्यसपछि सधैँ तनाव नै तनाव हुन्थ्यो । अब ढुक्क भइयो, कम्तीमा तनाव त हुन्न । जितेँ भनेर मख्ख परेको त्यो प्रतिद्वन्द्वीलाई हेरौँला नि कतिदिन चुरीफुरी गर्दो रहेछ ? त्यसका दुःखका दिन सुरु भए पछि मलाई बल्ल मज्जा आउँछ । त्यसलाई सजिलै काम गर्न कहाँ दिउँला र ? अहिले अबीर घसेर हिँडेको छ, अलि दिनपछि मुख कालोनिलो पार्नु परेपछि थाहा पाउँछ ।
यो त भयो हार्नेको हाइसञ्चो । जित्नेको उल्टो व्यथा छ । मतगणनाको नतिजा आएपछि त मज्जै भएको छ । अझै अलिदिन अबीरजात्रा गर्न पाइन्छ । गालाभरि रातो दल्न र गलाभरl फूलमाला भिर्न पाइन्छ । बधाई र शुभकामना थाप्न मज्जै हुन्छ । यसले पनि बोलाउँछ, उसले पनि बोलाउँछ । मख्ख पर्दै सेल्फी खिच्न कम झटक हुँदैन । तर यस्तो मज्जा बढीमा महिना दिन न हो । त्यसपछि त यसले पनि यसो गर्नुपर्यो भन्छ, उसले उसो गर्नुपर्यो भन्छ । घरमै घुइँचो, अफिसमै घुइँचो । न राम्रोसँग खान पाइन्छ, न सुत्न । एउटाको बारीमा गाईले मकै खान्छ लौ जनप्रतिनिधिज्यू आइदिनुपर्यो भन्छ । अर्कोको आँगनमा मोटरबाटो पुगेन लौ हजुर तपाईँले त जसरी पनि पुर्याइदिनुपर्यो भनेर अड्डी लिन्छ ।
चुनावमा जितिँदैन कि भनेर के के गर्छु भनियो, आफैँलाई सम्झना छैन । साथीहरुले गाउँका कोही पनि विदेश जान पर्दैन, गाउँमै काम मिलाइदिन्छु भनेको थिइस् अब कसरी मिलाउँछस् भनेर सोधेका छन् । कसरी मिलाउनु ? आफू त अहिलेसम्म बेरोजगार भएर बल्ल काम मिल्यो । चुनावको बेलामा त के-के भनियो के के भनियो नि ! उम्मेदवार हुँदासम्म त सबैथोक गर्छुजस्तो लाग्थ्यो । तर जितेपछि किन गर्नु जस्तो लाग्दो रहेछ । अहिलेदेखि नै सकिँदैन भन्न पनि मिलेन । अब भोलिपर्सिदेखि मान्छेको लाइन लाग्छ । एउटाले काम माग्छ, अर्कोले माम माग्छ, अर्कोले दाम माग्छ । दाम त आफैंँलाई चाहिएको छ, चुनावमा त्यतिका खर्च गरियो । लुकिलुकी कतिलाई बाँडियो । साथीहरु अझै भोज कहिले भनेर सोध्दैछन् । कतिका चित्त बुझाएर साध्ये । अहिले भएको खर्च पाँच वर्षमा उठाउन सकिएला कि भन्ने आश त छ । तर के गर्नु, खान्छ र सुघौँला भनेर विरोधी नाक चुच्चो पारेर घुम्न थालिसके । उनीहरुको नाकमा गन्ध नआउने गरेर र आँखा छलेर खान गाह्रो छ । चुनाव जितेकोमा एक मन खुशी भए पनि अर्को मन झन् डराएको छ । बरु हारेको भए आनन्दै हुन्थ्यो । एक दुई दिन त टेन्सन हुन्थ्यो नि, त्यसपछि त आनन्दको लाइफ । न चुनाव जितेर सुख छ, न हारेर ! उज्यालो अनलाइन डटकमबाट